Food on Wheels waxay iskaashi la samaynaysaa hadiyadaha loogu talagalay waayeelka xilliga fasaxa - Cunnada on Wheels
Ciidaha ayaa ah wakhti loo dabaaldego sanadka, lagu raaxeysto qaar ka mid ah heesaha ciida, isla markaana waqti la qaata dadka aad jeceshahay. Si kastaba ha noqotee, kumanaan waayeel ah oo ku go'doonsan Minnesota, ciidaha waxay u noqon karaan waqti aad u cidlo badan.
Cunnooyinka qaatayaasha Wheels waxay heli doonaan xoogaa jacayl dheeraad ah xilligan fasaxa ah. Iyadoo lala kaashanayo Hadiyadaha Waayeelka, Macaamiishayadu ma ahan oo keliya inay helaan cunto kulul, nafaqo leh iyo xiriir shaqsiyeed oo ka yimaada mutadawiciin heersare ah, laakiin hadiyad shaqsiyeed iyo xoogaa farxad ah
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan la shaqeyneyno Hadiyadaha Waayeelka xilligan fasaxa ah. Iyada oo leh taariikh dheer oo shaqo oo ka jirta beesheena labadaba Cuntooyinka Lugaha iyo Hadiyadaha Waayeelka waxay ka shaqeynayaan hadafyo isku mid ah. Metro Meals on Wheels oo aan la leenahay wada-hawlgalayaasha barnaamijkeenna, waxay horseed u yihiin dadaallada lagu hubinayo in dadka ka tirsan beesheena ay helaan cunnooyinka nafaqada leh iyo isku xirnaanta aadanaha ee ay u baahan yihiin si ay uga caawiyaan inay si madax-bannaan u noolaadaan. Hadiyadaha waayeelka waxay bixiyaan hadiyado iyo xiriir shaqsiyeed oo xaqiijinaya nolosha kumanaan waayeello go'doon ah oo ku nool Minneapolis / St. Deegaanka Paul iyo bulshooyinka ku xeeran iyada oo loo marayo ka qayb qaadashada iyo taageerada iskaa wax u qabso iyo la-hawlgalayaasha bulshada.
Hadiyadaha waayeelka waxay ku faafinaysay farxada fasaxa dadka waayeelka ah ee go'doonsan dhamaan magaalooyinka mataanaha ah kudhowaad 20 sano. Waxay siiyeen hadiyado iyo xiriir shaqsiyeed in ka badan 30,000 oo waayeel ah oo go'doon ku ah aagga metro tan iyo markii la aasaasay 1994.
Waxaan rajeyneynaa inaan u keenno xoogaa dhoolacadeyn ah macaamiisheena xilligan fasaxa ah. Haddii aad ogtahay qof ka faa'iideysan kara Cunnooyinka Wheels, ka hel macluumaad dheeri ah oo ku saabsan qaadashada cuntada. Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Hadiyadaha Waayeelka, booqo degel ama wac 612-298-8853.